မြန်မာအမျိုးသမီးမှန်ရင် FGM အချိတ်လေးတွေ ရှိဖို့တော့လိုတယ်နော်…. – FemaleWear.net
မြန်မာအမျိုးသမီးမှန်ရင် FGM အချိတ်လေးတွေ ရှိဖို့တော့လိုတယ်နော်….
Fashion လောကထဲကို အသစ်ဝင်ရောက် ထိုးဖောက်လာတဲ့ ဒီဇိုင်နာမိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်ရဲ့ FGM အချိတ်ဒီဇိုင်းလေးတွေကို တင်ပြပေးလိုပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာမိုးကုတ်ပေါက်ပေါက် ဆိုတာကတော့ Fashion လောကမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်တည်လာပြီး ယနေ့ထက်ထိတည်ရှိနေတဲ့ Designer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း မြန်မာ့ရိုးရာအချိတ်အဆင်များကို ခေတ်မှီနည်းပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့ FGM အချိတ်များကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။
FGM ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတိုင်းကို စျေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ အချိန်နေရာမရွေး ရာသီမရွေး ဝတ်ဆင်စေလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချိတ်တွေကို Non Metallic နဲ့ Metallic ဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စားထုတ်လုပ်ထားပြီးစျေးနှုန်းအရလည်း သောင်းဂဏန်းဘဲရှိလို့ သင့်တင့်မျှတသော စျေးနှုန်းဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာအချိတ်အဆင်များကို နှစ်သက်မြတ်နိုးကြသော မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက် FGM အချိတ်လေးတွေက ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။ ဝတ်ဆင်တဲ့အခါ မပူအောင်လည်း လီနင်ချည်သားလေးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ရေလျှော်၊ မီးပူတိုက်လို့လည်း ရတာကြောင့် ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ အရောင်သွေးစုံလင်ပြီး အသက်အရွယ်မရွေး ဝတ်ဆင်လို့ရနိုင်တဲ့ အချိတ်လေးတွေကို မြန်မာလိုတင်မကဘဲ အနောက်တိုင်းဆန်ဆန် party dress လိုဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့လည်း ဖန်တီးလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။
အရမ်းတန် အရမ်းလှပြီး အရည်သွေးပြည့်ဝတဲ့ FGM အစစ်ကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ဝတ်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုံချည်၏အောက်နားတွင် FGM အသားတံဆိတ်ပါတာကို သတိထားပြီး ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်နော်။
Tags: FGM, Traditional Dress